Mutongi Nyika Inonakidza YaAussie Anotonga Bitcoin Betting
Mitemo yeAustralia yebhola, iyo inozivikanwawo seAussie Rules, ndeimwewo mitambo yekubatana. Kutanga kutamba mu 1859 muMelbourne, yakazopedzisira yakatanga semutambo mukuru wenyika. Kuburikidza neAustralia Football League, Aussie Mutemo webhokisi yakakwezva vateveri vazhinji munyika, izvo zvakakonzera Aussie Rules Bitcoin kutengesa nhasi kuzivikanwa mumamiriro ekubhejera. Pamwe Bitcoin sports, Aussie Inotonga Bitcoin betting yakave yakawanda mune dzimwe nzvimbo dzekutengesa nzvimbo. Iwe unogona kutengesa pamitemo yeAussie pane mamwe mabhuku ezvimhanzi ane mbiri akadai: CloudBet, Nitrogen Sports, Bet365, BetWay, uye BetOnline.
Inotonga muAussie Inotonga Kutengesa
Iwe unogona kunge uri kufungidzira Mutemo Wemazano zvakafanana zvakafanana bhora remakumbo, asi mitemo muAussie Mitemo inoita kuti mutambo wacho uve wakasiyana uye usingaenzaniswi. Mune Aussie Anotonga Bitcoin kubheta, kunewo mamwe mimwe mitemo yekuziva. Mhedziso yekupedzisira, kusanganisira nguva yakawedzerwa kana yakakodzera, inogadza vahwina uye vakarasikirwa. Vose vanofananidzwa vanofanira kunge vane zvisungo zvishoma zve 80, kunze kwekutanga kwemwaka musangano iyo yakarongerwa kutamba nguva shoma. Kana mutsara wakarongerwa kwemaawa anopfuura 48 kubva panguva yekutanga, kubheji pamutambo kuchashaikwa uye danda richadzorerwa ku-akhawunti yako. Kana kukweta kuchiitika, mari yemari inonzi inoshandiswa uye purogiramu ichadzorerwa zvakare uye inoderedzwa iyo ichave yakavakirwa pamakumbo akasara ane chiito.
Aussie Anotonga maitiro ekubheja
Kana uchida kuedza kubheji bitcoins paAussie Mitemo inowirirana, heino mamwe Aussie Rules Bitcoin betting tips iwe unogona kushandisa kana chinangwa chako chirikubatsira. Kutanga, bheti kune rimwe boka iro rine zvakanakira. Chechipiri, isa mari pacheti nematambudziko ayo achaita kuti iwe uwane munguva yakareba. Pakupedzisira, usagara uchitengesa kumunhu wese anofarira pasi. Bhatirana pamusoro pekunakidzwa kumusoro mutambi. Zvechokwadi, neBitcoin, zviri nyore uye kusingabhadhara-kusina kubhadhara paAussie Rules ndezvekwako nguva dzose.